ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်လို၍ လာလျှောက်သူကိုနေဦးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်လို၍ လာလျှောက်သူကိုနေဦးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်လို၍ လာလျှောက်သူကိုနေဦးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Posted by ရွှေဘိုသား on Dec 26, 2011 in Copy/Paste |6comments
ရွာထဲ မရောက်တာကြာပြီမို့ ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းရိုက်ကူးမဲ့ ရုပ်ရှင်အကြောင်းဆွေးနွေးကြ ရုပ်တူတဲ့ ကိုနေဦးပုံကိုထင်မြင်ချက်တောင်းကြနဲ့ တော်တော်စည်ကားနေပါလား ငါတို့ရွာ တယ်မြန်တဲ့ ဆိုဒ်ပါလားတောင်တွေးမိတယ် ကိုယ်လည်းတင်မလို့ဝင်လာတာလေဗျာ အခုလည်း ပိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင် ကိုနေဦးနဲ့ ပြည်မြန်မာဂျာနယ်က အင်တာဗျုးလေးပါ ထပ်တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ ပုံတွေကတော့ မတင်တော့ပါဘူး ရွာထဲက သရဲကြီး မှားလို့ အစ်ကို မှော်ဆရာ တင်ပြီးသားလည်းဖြစ် လိုင်းကလည်းနှေးတာနဲ့ မတင်တော့ဘူးဗျာ အင်တာဗျူးတာလေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Facebook အကောင့်ရှိသူများကတော့ အောက်က လင့် မှာသွားရောက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်
Facebook အကောင့်မရှိသူတွေကတော့ ဒါလေးပဲဖတ်ပေါ့ဗျာ။ Facebook ကထင်မြင်ချက်တွေပါ ကျနော် ကွန်မန့် အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကော်ပီကြီးပါဗျာ ကြိုပြောတာနော် ၀ိုင်းပြီး ကလော်မတုပ် ကြနဲ့အုံး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပြီး နယ်ကနေ လာရောက်စုံစမ်းလျှောက်ထားနေသူ မြင်းခြံမြို့မှ ကိုနေဦးနဲ့ ပြည်မြန်မာဂျာနယ်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မိသားစုမွေးချင်းနှစ်ဦး အနက် အကြီးဆုံးသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- ဗိုလ်ချုပ်အတ္တုပ္ပတ္တိရိုက်ကူးဖို့ စိတ်ဝင်စားပြီး လာလျှောက်ဖြစ်ပုံပြောပြပေးပါ။
ဖြေ- ပြည်မြန်မာဂျာနယ်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အတ္တုပတ္တိရိုက်မယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ သူတို့ရွေးတာ မရွေးတာ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဖတ်ရရချင်းပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းကလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တူတယ်ဆိုပြီး ပြောကြသူတွေရှိတယ်။ ဗိုလ်သင်တန်းတက်တုန်းကလည်း အပြောခံရဖူးတယ်။ အဲဒါနဲ့ လျှောက်ဖို့ ရန်ကုန်ကိုလာတာပါ။ ကိုဇာဂနာက လူရှာနေတယ်လို့လည်း ကြားတယ်။ သတင်းစာထဲကလည်း ခေါ်မယ်လို့ကြားတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့က အချိန်မဆွဲချင်ဘူး။ စောစောစီးစီးရောက်၊ စောစောစီးစီးသိပြီး လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ချင်တယ်။
မေး- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးရက် မွေးလလည်း တူတယ်လို့ သိရတယ်။
ဖြေ- ဟုတ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်ပါ။ မြန်မာလိုတော့ မတူပါဘူး။ အဲဒါကတော့ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါ။
မေး- ဘာမှပြင်ဆင်ရတာတော့ မရှိဘူး။ ကျွန်တော် ဆံပင်အတိုညှပ်တယ်။ ပြီးရင်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ သက်ဆိုင်ရာကို ဓာတ်ပုံတွေ သွားပေးပါတယ်။ အဲဒါပါပဲ။ သူတို့က တရားမခေါ်သေးတော့ ဘာမှလုပ်လို့ မရသေးဘူး။ လောလောဆယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ တည်းနေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်က ကျွန်တော်မသိတာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ သိသလောက် အတိုင်းအတာတွေကလည်း ကျွန်တော် လုပ်နိုင်တာ ရှိကောင်းရှိမယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့က လုပ်ပေးရမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ အတွက် လူငယ်တွေလိုတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကာရိုက်တာ၊ ဗိုလ်ချုပ်က ဘယ်လိုလူစားလဲ။ အဲလိုမျိုးဟာကို မြန်မာလူငယ်တွေသိအောင် လုပ်ရမယ်။ ကမ္ဘာက ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားပြီးသား၊ ကမ္ဘာသိအောင် ဒီအတ္တုပ္ပတ္တိရိုက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ဗိုလ်ချုပ်နေရာကနေ အတော်များများသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူလိုတယ်ပေါ့။ သူတို့ကလည်း ရုပ်ရှင်လောကထဲက မရွေးဘူး။ အများပြည်သူထဲက ရွေးမယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တာ လုပ်ပြရမှာ။ တူသမျှ လူလာလျှောက်ကြမှာ၊ သူတို့ လုပ်နိုင်တာ မလုပ်နိုင်တာတစ်ပိုင်း၊ ဒါပေမဲ့ ခုနပြောသလို ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ အတွက် အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီး လုပ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်းဆင်တဲ့သူတွေ၊ ရိုက်ချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေ ဒါဟာ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပဲ။ ပြည်သူတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်လို့ မြင်တယ်။
မေး- ဗိုလ်ချုပ်အတ္တုပ္ပတ္တိကို တကယ်လက်တွေ့ရိုက်ဖို့ အတွက်ကော ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ။
ဖြေ- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းပြောတာတွေ နားထောင်ထားတယ်။ သူပြောတဲ့ စကားတွေ၊ သူသုံးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ နားထောင်ကြည့်နေတယ်။ တချို့ဟာတွေပဲ နားထောင်ရတယ်။ အကုန်မပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တူလားမတူလားတော့ ကျွန်တော်တုိ့ မသိနိုင်ဘူး။ လူကြီးတွေသိမယ်။ အမေစု (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) တို့သိမယ်။ သူတို့တွေ ရွေးကြမှာ။ သူတို့ရွေးတဲ့ နေရာမှာတစ်ယောက်တည်း ရွေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အများကြီးရွေးမှာ။ အများကြီးရွေးမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ်နဲ့အံဝင်တဲ့နေရာမှာ အံဝင်သွားအောင် သရုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ဗိုလ်သင်တန်း တက်ခဲ့ဖူးတယ်။ တချို့ဟာတွေက ကြမ်းကြမ်းတမ်းလုပ်လို့ရတယ်။ ပြီးတော့ လူတစ်ယောက်က ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်း တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင် သူတို့က ဒီအတိုင်းပစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့က လုပ်ပေးမျာ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့က တတ်နိုင်သလောက်ရိုက်ဖို့လိုတယ်။ ရိုက်တာမရိုက်တာ၊ ရွေးတာမရွေးတာ လူကြီးတွေရဲ့ အလုပ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာရှိပါတယ်ဆိုတာ ပြရမှာက ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါ။ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်လာတယ်။ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်နေတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်စုံစမ်းပြီး လာလျှောက်တယ်။
မေး- တကယ်လို့ ဒီဇာတ်ကားရိုက်ဖို့ ရွေးချယ်ခံရပြီဆိုရင် ဒီကားက သုံးနှစ်ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် စီးပွားရေးကိုပစ်ပြီး ဒီမှာရိုက်ဖို့ကတော့ အဆင်ပြေပါ့မလား။
ဖြေ- အဓိကက ကျွန်တော်က ထမင်းစားနေရရင် ရိုက်လို့ရတာပဲ။ ကျွန်တော့်အမေကလည်း ကျောင်းဆရာမ၊ သူ့ဝင်ငွေနဲ့သူရပ်တည်နိုင်တယ်။ အဲဒါကျတော့ သူ့ဘာသာသူ သုံးနှစ်မကလို့ ဘယ်နှနှစ်ပဲရိုက်ရိုက် ထမင်းစားလို့ရတယ်။ နေလို့ရတယ်ဆိုရင် ရိုက်နေမှာပဲ။ ပြဿနာမရှိဘူး။
မေး- ဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် ပြည်သူလူထုကို ဘာတွေလုပ်ပြချင်လဲ။
ဖြေ- ဒါကျွန်တော့်အတွက်ရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားကို ရိုက်မှာ။ ကျွန်တော်က မင်းသားဖြစ်ချင်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မင်းသားလုပ်ဖို့လာတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကာရိုက်တာဘယ်လိုရှိလဲ။ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ ပြည်သူလူထုသိအောင် ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကား။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တူအောင် သရုပ်ဆောင်ဖို့က အင်မတန်တော့ ခက်လိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် လူတွေ အများကြီးလိုမယ်။ အများကြီးလေ့ကျင့်ရမယ်။ အများကြီးပံ့ပိုးရမယ်။ ကျွန်တော်ပြင်ထားတာ စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ငါမဖြစ်ဖြစ် အောင်လုပ်မယ်။ ငါ့ကိုရွေးသည်ဖြစ်စေ မရွေးသည်ဖြစ်စေ ငါ့ရောက်အောင်သွားရမယ်။ ပြောပြရမယ်။ တင်ပြရမယ်။ ရွေးရင်လည်းတစ်မျိုး၊ မရွေးရင်လည်း ပြန်ရုံပေါ့။
မေး- အခု ဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ ဆံပင်တိုလိုက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းတွေ နားထောင်တာ အပြင် ဘာတွေလေ့လာနေလဲ။
ဖြေ- ဗိုလ်ချုပ်ကဘယ်လိုပြောလဲ။ ဘယ်လိုစကားလုံးတွေ သုံးလဲ။ လေယူလေသိမ်း ဘယ်လိုပြောလဲ။ အသံက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူဘူးလေ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့က လေ့ကျင့်ရဦးမယ်။ သူတို့ရွေးမှ လေ့ကျင့်ရင်မကောင်းဘူး။ အချိန် မလောက်ဘဲဖြစ်နေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ လိုတာပေါ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တူဖို့ဆိုတာလည်း တော်တော်လေးကို ခဲယဉ်းပါတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တာ ကိုယ်လုပ်တာပဲ။ ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတာက စိတ်ကိုပြင်လို့ရတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာလည်း ငါဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ပုံစံဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ အဲလိုပေါ့။
မေး- အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေက ဒီလိုမျိုးစီစဉ်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
ဖြေ- ပျော်တာပေါ့။ ဒါဖြစ်သင့်တာ ကြာပြီလေ။ ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ပြီးလုပ်မယ့် သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ ခုခေတ်က စီးပွားရေးခေတ်ဆိုတော့ စီးပွားရေးလောကသားတွေ အခွင့်ကောင်းယူမှာပဲ စိုးတယ်။
Report · December 20 at 9:44pm
အမေးအဖြေအရတော့ မဆိုးဘူးဗျို့ 
လုပ်ယူထားတာလား.. ပင်ကိုယ်လားတော့မသိဘူး ပြတ်သားမှုတော့ပါတယ်…
o Report as Abuse…
Sa Lain အောင်မြင်ပါစေ
December 20 at 9:57pm · 2
Zaw Myo Naing အောင်မြင်ပါစေကွာ
December 20 at 10:10pm · 1
သမီး ဆိုး ကိုနေဦး စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ ကြိုက်တယ် ………
December 20 at 10:17pm
အည တြရ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့မတူလိုပါ..ဖြစ်နိုင်ရင် မျက်နှာတောင်ခွဲစိတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်လေ…လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့ အားပေးပါတယ်..အောင်မြင်ပါစေဗျာ အဖေ အကြောင်းကို ဟိုးတုန်းထဲက ဒီလိုပဲ လုပ်သငိ့ပါတယ်…..
December 20 at 10:27pm · 1
Pandora Herz တကယ်တော့ မတူလို့ မကြိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူး လူတိုင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်နေတာ
ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းရိုက်ကူးရင် ညံ့နေမှာ လိုနေမှာ ဆင်ဆာဖြတ်ခံရမှာတွေဖြစ်ပြီး အနှစ်မရှိတာမျိုး ဖြစ်မှာကို တွေးပူနေမိပြီး ကန့်ကွက်သံလေးတွေ ညံနေတာ
December 20 at 10:44pm · 1
သံလွင် ရရစ် အစိုးရလဲ တဖြည်းဖြည်းတော့ နောင်တရလာပါဘီ ထင်ပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ
December 20 at 10:47pm
Min Thura ဗိုလ်ချုပ်ကားရိုက်မှာကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူ့ကျွန်မခံပြီလို… ကျန်စစ်မင်းလို ခပ်ပေါပေါကားဖြစ်သွားမှာ အရမ်း(အရမ်း)ကို စိုးရိမ်မိပါတယ်.. စာဖတ်နည်းတဲ့ ပရိတ်သတ်ဟာ ဇာတ်ကား(ညံ့ခဲ့ရင်) သမိုင်းအမှတ်မှားတာမျိုးတွေဖြစ်မှာကိုတော့ မဖြစ်စေချင်ပါ….
December 20 at 11:07pm · 5
Kowai Lu အပြည့်အ၀အားပေးတယ်ညီ။ကိုယ်တိုင်လဲ ကျရာနေရာတစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိင်နိင် ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားဖြစ်မယ်။အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားသမ္မဂအခန်းတွေမှာပေါ့……….
December 21 at 9:53am · 1
Chan Thu The lady ကားထဲက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသရုပ်ဆောင်ပုံတော့ အသက်မပါဘူး။ အဓိက အားမာန်လိုနေတယ်။ အခု ကိုနေဥိးကတော့ အရွေးခံရရင်ပေါ့။ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။ လူတူတာ မတူတာ အသာထား ဗိုလ်ချုပ်လို သရုပ်ဆောင်မယ့် လူအရွေးခံရရ အဓိက အားမာန်ပါရမယ်။ ပြတ်သားရမယ်။ ဟက်ဟက် လူယဉ်ကျေးတွေပြောတဲ့ လူ့ဂွစာပေါ့။ အဲလိုဖြစ်နေရမယ်။ လူတူတူရင်ပိုကောင်းပေမယ့် နည်းနည်းဆင်တူတဲ့လူလည်း အားပေမယ် အဓိက ဇာတ်ကားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
December 21 at 10:56am
ဆရာ သီဟ ညီလေးရေအောင်မြင်ပါစေ…….
December 21 at 10:58am
Sebastian Bo ကိုနေဦး ဖြေသွားပုံက အင်မတန်မှာ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ဆီကို ဒဲ့ပဲ ဘာတွေ ပဲ ဘေးက ရှိနေပါစေ… သူ က ဒဲ့သမားဗျ ဗိုလ်ချုပ်နေရာက သရုပ်ဆောင်မယ့်လူတယောက်အနေနဲ့ အဲလို စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိနေတာ ကျနော်တော့ သဘောကျတယ်။
December 21 at 12:35pm · 6
Thaung Thaung Aye ဟုတ်ပါတယ်……………အောင်မြင်ပါစေ။
December 21 at 2:07pm
Kitty Aye Mar Mar Ko Nay Oo, Wish you be successful since you have strong desire and only single ambition to show about Bogyoke to whole world.. Appreciated also brother.
December 21 at 9:25pm
Ma May လက်ရှိ သူပြောနေတဲ့ အနေအထားအရ ဆို ဗိုလ်ချုပ် ကို လေးစားတာ က အဓိကမို သူ့ ကို ရိုက်ကူးရေးကော်မတီ က ခေါ်ယူ အင်တာဗျူးကြည့်သင့်တယ် ။
December 22 at 9:17am
ငရဲသား သီဟ ကိုနေဦးဖြေသွားတာကိုကြည့်ရတာ သရုပ်ဆောင်ကြေးဆိုတဲ့စကားလုံးဝမပါဘူး လေးစားပါတယ် တကယ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားလို့လာလျှောက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ဒီနေ့သရုပ်ဆောင်နေကြတဲ့နံမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေလည်းအတုယူသင့်ပါတယ် ဇာတ်ကားတကားအတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်မပေးဘဲ ပိုက်ဆံကိုဘဲအဓိကထားနေရင်တော့ ရှေ့လျှောက်မလွယ်တော့ပါဘူး
ကျွန်တော့ ပိုစ်လေး ပြီးပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဗျာ…ကျေးဇူး ရွှေဘိုသားရေ
မှာ သွားကြည့်နှိုင်ပါကြောင်း ..
ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ဗီလိန်ခန်းတွေတော့ ပါရမှာပဲ
အဲဒီ ဗီလိန်တွေနေရာမှာ ဘယ်သူကရော သရုပ်ဆောင်လျှောက်ကြမလဲမသိဘူးနော်။
( ဖြေ- ဒါကျွန်တော့်အတွက်ရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားကို ရိုက်မှာ။
ကျွန်တော်က မင်းသားဖြစ်ချင်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မင်းသားလုပ်ဖို့လာတာလည်း မဟုတ်ဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကာရိုက်တာဘယ်လိုရှိလဲ။ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ ပြည်သူလူထုသိအောင် ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကား။
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တူအောင် သရုပ်ဆောင်ဖို့က အင်မတန်တော့ ခက်လိမ့်မယ်။
အဲဒီအတွက် လူတွေ အများကြီးလိုမယ်။ အများကြီးလေ့ကျင့်ရမယ်။ အများကြီးပံ့ပိုးရမယ်။
ငါမဖြစ်ဖြစ် အောင်လုပ်မယ်။ ငါ့ကိုရွေးသည်ဖြစ်စေ မရွေးသည်ဖြစ်စေ ငါ့ရောက်အောင်သွားရမယ်။
ပြောပြရမယ်။ တင်ပြရမယ်။ ရွေးရင်လည်းတစ်မျိုး၊ မရွေးရင်လည်း ပြန်ရုံပေါ့။ )
ဒီသဘောလေးကတော့ ဟုတ်တုတ်တုတ် ဘဲ
ဒါပေသိ လူအတော်များများရဲ့ ထပ်တူတဲ့ သဘောကတော့
ဒီဇာတ်ကားကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ ဘရုပ်သုတ္ခ မလုပ်ကြဘို့ တောင်းဆိုနေကြတာဘဲ
ဟတ်လား ( ဗိုလ်ချုပ်လေသံဖြင့် )
ဟာ ဒါက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကြီးဘဲ ဒို့တော့ အစွမ်းရှိသလောက် ကြိုးစားကြမယ်ကွ
လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး တစ်ကယ်လည်း ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့
စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်း အထူး ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါတယ်
( တစ်ကယ်ရိုက်ဖြစ်လို့ အဲ့သည်ဇာတ်ကားထဲ
မာစတာကြီးက ရွာသူလေး တစ်ယောက်ကို ပွဲကြမ်းတဲ့အခန်းလေးများပါခဲ့သည်ရှိသော်
ကျုပ် ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကိုယ်တိုင် မာစတာကြီးအခန်းကနေ
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လေးလေးနက်နက် ကိုယ်ဖိရင်ဖိ စိတ်အားထက်သန်စွာ
အပီအပြင် သရုပ်ဆောင်ခမယူဘဲ စေတနာဗလပွဖြင့် ပါဝင်ပေးပါမည် ( စကားချပ် ) )
သို့သော် ကိုယ်စေတနာရှိသည်က တစ်မျိုးသွားပြီး
ကိုယ်တတ်သလောက်လေးတွေနဲ့ဖျစ်ညှစ်ပြီး မလုပ်ကြဘို့တော့ အထူးတောင်ဆိုပါတယ်
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရွှေရတုနဲ့ ကြုံကြိုက်တာလည်း သဘောပေါက်ပါတယ်
လက်ရှိ ခွေးမသား ထိပ်ပျောင် အစိုးရရဲ့
မျက်ခွက်ပျောင်တဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဇာတ်ကားထဲပါဝင်သုံးနှုံးရမဲ့ ဇာတ်ကြောတွေ
နိုင်ငံရေးပေါ်ရစီတွေ စတာ စတာ တွေရဲ့ လွပ်လပ်မှု့ဟာ ဒီဇာတ်ကားတွက်
အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ( အထင် )
ဆိုလိုတာက ဒီဇာတ်ကားတွက် စကားလုံးအသုံးအနှုံးတွေ ဇာတ်ကြောတွေကို
မအေလိုးတွေက ဆင်ဆာဖြတ်ရင်တော့ ဒီဇာတ်ကား နတ်ပွဲလောက် စောက်ဖြစ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး
သဂျီးမင်း တစ်ခုသော ပိုစ်မှာ အမိန့်ရှိထားသလို ( သူက သဂျီးဆိုတော့ ဖါးရသေးတယ် )
ခုခေတ်ကြီးမှာ ဟိုဒင်းကိုတောင် ဟဝှာလုပ်ပြစ်လို့ ရတာဘဲနော
ဒါ့ကြောင့် ထုံးသုတ် ဆေးမှုတ်ပြီး လုပ်လို့ရပါတယ်
ရုပ်လည်းတူတယ် သရုပ်ဆောင်မှု့လည်း တူတယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းမသိပေါ့
( မိမိအနေနှင့် အကြံပြုခြင်တာကတော့
ဒီဇာတ်ကားတွက် ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလို့ခေါ်သလား ဇာတ်လမ်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို
ထိတ်ပြောင်တို့ နှင့် ဦးစွာ အကျေလည် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် )
ကျုပ် အကြံပြုချက်လေး သက်ဆိုင်သူ တစ်စုံ တစ်ဦး ကြားစေသောဝ်
ဦးဘဇင်းဘဒ္ဒ န္တမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု အား ဂဠုန်ဦးစော ၏ ဇာတ်ကောင်နေရာမှ ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း
၄င်း အပြင် ဇာတ်လမ်း စရိုက် ပိုမို သဘာဝကျစေရန် ကြိုးပေးခန်းတွင် ဒဂယ့် ကြိုး အစစ်ဖြင့် ဒဂယ် ပေးပြီး
ရိုက်ကူးသွားမည်ဟု ဒဒင်း ကြားရသည်။